Deg Deg: Xog Culus Muxu Ex Wasiir Xaglo Toosiye Ka Codsaday Madaxweyne Muuse Biixi Ka Hor Socdaalkiisa Garoowe - Wargane News
Home Somali News Deg Deg: Xog Culus Muxu Ex Wasiir Xaglo Toosiye Ka Codsaday Madaxweyne...
Deg Deg: Xog Culus Muxu Ex Wasiir Xaglo Toosiye Ka Codsaday Madaxweyne Muuse Biixi Ka Hor Socdaalkiisa Garoowe
Warar hoos oo soo gaadhay shabakadda Barigaafrika ayaa tibaaxaya in wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka wakhtigii xukuumadda Siilaanyo Saleeb Axmed Ciise Xaglo-toosiye uu kullan hoose oo uu shalay madaxtooyada kula qaatay Muuse Biixi Cabdi madaxwaynaha Somaliland.
Kullankan Xaglo-toosiye iyo madaxwayne Biixi oo ahaa mid kedis ah isla markaasina laga qeyriyey saxaafadda ayaa waxay wararku sheegayaan in ay ka wada-hadleen madaxwaynaha arrimo siyaasi oo haatan ka taagan Somaliland.
Arrimaha ay ka wada hadleen Muuse Biixi Iyo Xaglo-toosiye waxa ugu weynaa; Sidii loo demin lahaa kacdoonno bulsho oo haatan sansaantoodu ka muuqato gobolka Sool oo asal ahaan uu ka soo jeedo Xaglo-toosiye iyo sidii uu Xaglo-toosiye ula shaqeyn lahaa xukuumadda Muuse Biixi oo haatan uu mucaarid ku yahay.
Saleebaan Ciise Axmed Xaglo-toosiye wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka ayaa dhawaan Hargeysa ku soo noqday kaddib in muddo ah oo uu ka maqnaa. Xaglo-toosiye ayaa xukuumaddii uu Muuse Biixi soo dhisay markii ay maalmo jirtay dhalliilay isaga oo madaxwayne Muusena ku tilmaamay nin abaal laawe ah – waxa kale oo uu hadalo kulkul tiraba dhowr jeer u mariyey saxaafadda madaxa banaan.
Arrintan ayaa noqon karta mid ah; xildoonnimo. Wasiir Saleeb Ciise Axmed ayaa wararku sheegayaan in uu madaxwaynaha ka codsaday in uu ka qeyb geliyo xukuumaddiisa si uu u dejiyo duufaanada siyaasaddeed ee ka soo cusboonaaday gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood oo maalmihii u danbeyey ay ka socdoon muddo-haraado lagaga soo horjeedo xukuumadda madaxwayne Biixi. Ma jiro war sheegaya in dalabaadka ay labadan masuul waa (Xaglo-toosiye iyo Muuse) ay isku afgarteen.
Shirkii jar’aaid ee ugu danbeeyey ee uu qabtay madaxwayne Muuse Biixi mar wax laga weydiiyey dhalliilaha iyo sidoo kale mucaaridnimada culus ee uu kala kulmay Saleebaan Xaglo-toosiye waxa uu ku tilmaamay in uu wax tabanaayo isla markaasina uu xukuumaddiisa ku noqday mucaarid. Qofka mucaaridka ahna wax kasta laga filan karo – waa sida uu hadalka u dhigay madaxwayne Biixi.
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa aaminsan in masuuliyiinta uu madaxwayne xukuumaddiisa ku daray ee ka soo jeeda gobolka Sool gaar ahaan beesha Dhulbahante ay yihiin kuwo aan awood badan ku lahayn gobolka ay ka soo jeedaan isla markaasina Saleebaan Ciise Axmed Xaglo-toosiye uu yahay masuul awood buuxda ku leh gobolkaasi – beesha uu ka soo jeedana wixii dalabaadkooda ah uu dhammeystiri doonno.
Haddaba isweydiintu waxay tahay Muuse muxuu tabanayaa, Saleebaan Xaglo-toosiye muxuuse dalabkiisu yahay?
Muuse muxuu tabanayaa?
Muuse Biixi madaxwaynaha Somaliland waxa uu sheegaa in marka arrini ku timaado uu cidda aqoonta u leh la kaashado. Kacdoonka siyaasiga ah iyo kan bulsho ee kaga iman kara dhanka gobolka Sool waa uu ka warqabaa, waxaanu ku dedaalayaa sidii uu uga hor tegi lahaa intii aanay hadhow ku soo oodmin. Waxa tusaale ah in ka hortaga uu sameynaayo Muuse Biixi madaxwaynaha Somaliland uu qeyb ka yahay sidii uu Xaglo-toosiye gacanta ugu dhigi lahaa.
Xaglo-Toosiye Muxuu dalbanayaa
Waxa ugu daran ee dantiisa ah Saleebaan Ciise Axmed Xaglo-toosiye waa in uu helo xil. Waxa jira wararka qaar oo sheegaya in uu Xaglo-toosiye u hanqal taagayo sidii uu iskaga dhiibi lahaa maamulka Puntland isla markaasina uu iskugu soo sharaxi lahaa doorashada madaxwaynaha oo dhacaysa sannadka 2019-ka.
Ugu danbeyntiina ex- wasiir Xaglo-toosiye iyo Muuse Biixi ayaa u muuqda kuwo is fahamkoodu ka soo dhow yahay sidii hore.
Kullanka Muuse iyo Xaglo-toosiye waxa caddaymo in weriyayaasha madatooyada Somaliland ay sawir muujinaya farxad iyo is fahan kula soo galeen madaxtooyada Somaliland.
Dr. Saleebaan Axmed Ciise (Xagla Toosiye)
Mujaahid Muuse Biixi Cabdi
Deg Deg: Maamulka Puntland Oo Hada Hawda Ka Saaray Tv Qaranka Somaliland SLNTV
Raysalwasaaraha Australia oo ka badaaday codka kalsoonida!
Somalia: Madaxweynaha Maamulka Muqdisho oo kulan la qaatay ergeyga gaarka ah ee Museveni.